[22 / 05 / 2020] Turkey's Blue Bayraklı Ọnụ ọgụgụ osimiri na-amụba! # 3 na .wa	General
[22 / 05 / 2020] A ga-akwụ ụgwọ ndị ọzọ maka ndị ọrụ na-akwụ ụgwọ taa	06 Ankara
[22 / 05 / 2020] 4 Emechila Ihe Mgbakwunye Ubochi udo nke Turkey	General
Trabzon Beşikdüzü Member Council Council Member Önder Öztürk kwuru na ụlọ ọrụ ụgbọ ala na-eme ihe megidere nkwekọrịta na Beşikdüzü. Öztürk kwuru ihe ndị a; “Companylọ ọrụ na-arụ ọrụ Beşikdüzü Cable Car Facilities [More ...]
Emeputara nnyocha iji mata ihe nsogbu oria ojoo a na-eme na njem ndị njem na okporo ụzọ Istanbul. A ga-ejikwa ọmụmụ ihe ahụ iji chọpụta usoro ọhụụ na nyochaa omume ndị njem mgbe ntiwapụ ahụ gasịrị. [More ...]
Mgbe nnyefe ụdị ahụ wee bụrụ nke otu ụlọ ọrụ MPG Mach Production Group rụpụtara, Mkpokọta ndị a na -emepụta ọtụtụ ihe na-abụ na Mee. [More ...]
Kenan Çalışkan, Onye isi oche nke Transportgbọ njem-Sen, TCDD Taşımacılık A.Ş. Itingga leta General Manager Kamuran Yazıcı n'ọfịs ya ma rịọ maka nkwalite nke ajụjụ ọnụ na mgbanwe nke Title ọzọ. [More ...]
Gaa na Ankarakart na Başkentray